Wararka - Xakamaynta heerkulka xakamaynta inta lagu jiro samaynta bacda
Inta lagu gudajiro samaynta bacda, mararka qaarkood shaabadaynta shandadu ma fiicna. Wax soo saarka qaabkan loo soo saaray waa mid aan u qalmin. Maxaa sababa dhacdadan? Waa inaan fiiro gaar ah u leenahay heerkulka jaraya kuleylka
Waa soo dejin si loo xakameeyo heerkulka magaabay inta lagu jiro samaynta bacda, haddii heerkulku aanu ku habboonayn, bacda dhammeystiran uma qalmi doonto.
Marka hore, iska hubi waa maxay waxyaabaha aan isticmaaleyno. Wax isku mid ah oo dhumucdiisuna way kala duwan tahay dherer kala duwan, waxay u baahan tahay heerkul kala duwan. Tijaabi dhowr jawaan bilowga mashiinka socda si aad u hesho heerkul habboon
Marka labaad, maaddo kaladuwan ayaa u baahan heerkul kala duwan.
Heerkulka goynta ayaa go'aaminaya tayada kiishka, haddii heerkulkiisu aad u sarreeyo, maadadu way dhalaali doontaa, geesku ma fidsan yahay oo walxaha ayaa ku dhegi doona, ka dibna waxay noqon doontaa bac qashin ah, haddii heerkulku aad u hooseeyo, ma goyn karo bacda gebi ahaanba, waana la qaadi doonaa boorsada ku xigta.
Sidoo kale, marka xawaaraha mashiinku dhaqso u socdo, heer kulku sidoo kale wuxuu u baahan yahay inuu sare u kaco, marka xawaaruhu hoos u dhaco, heer kulku sidoo kale wuxuu u baahan yahay inuu hoos u dhaco si waafaqsan
Waxaan u baahanahay inaan sifeeyo mashiinka kuleylka si joogto ah mashiinka ka dib, markaan xoogaa socono, wuxuu ku yeelan doonaa xoogaa boodh ah mashiinka gooya, hadaanan nadiifin, boodhku wuxuu u wareegi karaa bacda.
Sidoo kale, waxaan u baahanahay xaalad jeex jeex ah, ka dib markii magaabay kuleylka uu shaqeynayo in muddo ah, waa inaan ku bedelnaa mid cusub, ka dib markuu gooyo isticmaalkiisa in muddo ah, ma yeelanayo wax fiiqan.
Marka haddii aan si sax ah u xakameyn karno heerkulka goynta kuleylka inta lagu jiro sameynta bacda, waxay kordhin kartaa awoodda wax soo saar, waxay yareyn kartaa qashinka bacda, si aan u yareyn karno kharashka.